Gigaset GX290: Atụmatụ, Nkọwapụta na Ahịa | Gam akporosis
Gigaset GX290 bụ smartphone ọhụrụ nwere batrị batrị 6,200 mAh
Gigaset bụ akara German nke na-anaghị enwekarị ọnụnọ na ụlọ ọrụ ama ama ama ama, mana ugbu a anyị nwere ya ebe a ma anyị nyere ya ọrụ kachasị na ohere ọhụụ a ebe ọ ka malitere ọrụ ahụ Gigaset GX290, a na-ajụ-arụmọrụ ọnụ na-anọchi tumadi maka oké obodo kwụụrụ ya ọ na-enye n'ihi na eziokwu na ọ na-eburu a batrị na nnukwu ikike.
Ihe a haziri nke a mobile bụ ihe na-kwụpụta n'etiti ndị ọzọ na atụmatụ nke ya. Site na nke a na àgwà niile ọ na-eweta, ọ ga-asọmpi ozugbo na ụlọ ọrụ dịka Energizer na Blackview n'otu akụkụ ahụ.
1 Gigaset GX290 Atụmatụ na nkọwa
Gigaset GX290 Atụmatụ na nkọwa
Ngwaọrụ ọhụrụ a na - abịa na 6.1-anụ ọhịa diagonal ihuenyo na HD + mkpebi nke 1,560 x 720 pikselụ, Ọkachamara n'ụdị ọdịda mmiri na iko Corning Gorilla Glass 3 nke na-eme ka ọ ghara iguzogide egwu, ọkọ na mmejọ ndị ọzọ.
Gigaset GX290 na-etu ọnụ ike niile nke Helio P23 chipset si Mediatek Ọ nwere ike inye ma kwadebe ihe nchekwa nke 32 GB na nkwado maka mgbasawanye site na microSD. Agbanyeghị, ekpughere ebe nchekwa RAM, n'ihi ya ọ bụ ihe anyị ga-amụ ma emechaa.
Achịcha gam akporo na steeti ya dị ọcha na-aga na njedebe, ebe akwụkwọ IP68 na-enye nguzogide mmiri. N'otu oge ahụ, Ngwunye batrị 6,200 mAh nwere nkwado ngwa ngwa na-akwụghachi gị azụ site na 0% gaa na 100% n'ime naanị awa atọ.. Ọ na-ejikwa teknụzụ na-akwụ ụgwọ na ikuku, n'ihi ya, ọ gaghị adị mkpa iji jikọọ ya na oghere iji jide ụgwọ ahụ.
Ike Ike Max P18K Pop: Smartphone nwere batrị 18.000 mAh
Nhọrọ njikọta gụnyere bandụ 802.11 a / b / g / n Wi-Fi (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, ọdụ USB-C 2.0 na-akwado OTG, A-GPS, na NFC. Ihu ihu na onye na-agụ mkpịsị aka anọghị na ekwentị, yana a abụọ n'azụ igwefoto nke 13 na 2 MP na a n'ihu shooter nke 8 MP.
Ọnụahịa a kapịrị ọnụ nke ekwentị a bụ euro 299 ewepu VAT.. Ọnụ ya, nke ejiri ihe ikpeazụ a gbakwunye, ga-abụ ihe dị ka euro 360 ihe dị ka. Ọ ka ga-ahụ ahịa ndị ọ ga-eru, mana Spain nwere ike ịrịọ maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gigaset GX290 bụ smartphone ọhụrụ nwere batrị batrị 6,200 mAh
Misfit Vapor X: Smartwatch ọhụrụ ahụ na Wear OS